Kutanga Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner kunzi Berlin
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kutanga Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner kunzi Berlin
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Kutanga Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner kunzi Berlin.
Lufthansa uye guta guru reGerman vane hukama hwakareba uye hwakakosha. Iyo prewar kambani yakavambwa muBerlin muna 1926 uye yakasimuka zvakare kuti ive imwe yendege dzinotungamira pasi rose. Kutevera kupera kweHondo Yenyika II uye kwemakore makumi mana nemashanu, chete ndege dzevatorwa dze'vabatsiri 'dzakatenderwa kumhara muguta rakakamurwa.
Mhemberero yepamutemo yekutumidza mazita uye yekutanga ndege yeLufthansa yekutanga Boeing 787-9 gore rinouya rakarongerwa gore rinouya.
Lufthansa yakazivisa kuti ichagamuchira ndege shanu dzeBoeing 787 Dreamliners muna 2022.
Mafuta ekushandisa uye CO2 emissions yendege-dhonza ndege dzakatenderedza 30 muzana kudzika pane ivo vatangiri.
Guta guru reGerman rinogamuchira mumiriri mutsva "wekubhururuka": Lufthansa iri kudaidza yayo yekutanga Boeing 787-9 "Berlin." Mhemberero yekudoma mazita inonzi ichaitika zvichitevera kuendeswa kwendege gore rinouya.
"Berlin”Ndiyo yekutanga pa787 Boeing 9-2022 Dreamliners iyo Lufthansa ichawedzera kune yayo ngarava muna 2.5. Ndege yemazuva ano-refu inotakura inoshandisa paavhareji chete 100 litita eparafini pamunhu mufambi uye makiromita zana kubhururuka. Izvo zvakapoterera makumi matatu muzana muzana pane yakatangira ndege. Iyo CO30 emissions yakagadziriswazve zvakanyanya.
Kubva 1960, Lufthansa yanga iine tsika yekupa zita rekuti ndege dzayo kubva kumaguta eGerman. Willy Brandt, Chancellor weWest Germany kuma1960s nema70s, akakudza Lufthansa panguva yake saMeya weWest Berlin (1957-1966) nekutumidza ndege yekutanga Boeing 707 "Berlin".
Munguva pfupi yapfuura, Airbus A380 ine chinongedzo chekunyoresa D-AIMI yaive nezita rakakurumbira reguta guru reGerman. Yekutanga Lufthansa Boeing 787-9 - "Berlin" - ichanyoreswa D-ABPA. Yekutanga yakarongwa yekuenda kune dzimwe nyika kuenda kuLufthansa's 787-9 ichave iri Toronto, nzvimbo yezvemari yekuCanada uye hub.
Lufthansa uye guta guru reGerman rine hukama hwakareba uye hwakakosha. Iyo prewar kambani yakavambwa mu Berlin muna 1926 uye akamuka zvakare kuti ave imwe yendege dzinotungamira pasi rose. Kutevera kupera kweHondo Yenyika II uye kwemakore makumi mana nemashanu, chete ndege dzevatorwa dze'vabatsiri 'dzakatenderwa kumhara muguta rakakamurwa.
Kubva pakubatanidzwazve, Lufthansa yanga ichibhururuka ichienda kuBerlin kweanopfuura makore makumi matatu, pasina rimwe boka renhandare dzendege riri kubhururuka maBerliners mazhinji pasi rese mumakumi emakore apfuura seLufthansa neainotakura hanzvadzi. Parizvino, ndege dzeLufthansa Group dzinobatanidza guta guru reGerman kune dzimwe nzvimbo mazana maviri nemakumi maviri pasirese, pamwe nendege yakananga kana kuburikidza nekubatana mune imwe yemahombe mazhinji eboka.